Nanainga ny fameperana fisakafoanana i Tokyo rehefa tratry ny fandroahana tranga COVID-19 vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Nanainga ny fameperana fisakafoanana i Tokyo rehefa tratry ny fandroahana tranga COVID-19 vaovao
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • culinary • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Divay & Fanahy
Nanainga ny fameperana fisakafoanana i Tokyo rehefa tratry ny fandroahana tranga COVID-19 vaovao.
Any Tokyo, manodidina ny 102,000 ireo trano fisakafoanana voamarina fa manana fepetra ilaina hanohitra ny COVID-19 dia tsy ho azon'ny fangatahana hampiatoana intsony ny alikaola alohan'ny 8 ora alina amin'ny ora eo an-toerana.
Ny isan'ny tranga vaovao voamarina momba ny coronavirus dia nihena be nanerana an'i Japana.
Ny renivohitr'i Tokyo ihany no nanamafy tranga 19 vaovao momba ny fihanaky ny COVID-19 tamin'ny alahady.
Nesorina tao Tokyo ny famerana ny trano fisakafoanana ary nanodidina ny prefektiora voalohany tao anatin'ny 11 volana.
Raha ny tranga COVID-19 voamarina isan'andro dia nianjera mafy nanerana an'i Japon ny Alahady, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba ary Osaka dia nanala ny fameperana COVID-19 androany.
Nesorina voalohany tao anatin'ny 11 volana ny fameperana amin'ny fanomezana toaka sy ny ora fiasana any amin'ny trano fisakafoanana ao an-drenivohitra sy Osaka, taorian'ny firongatry ny fihanaky ny areti-mifindra manerana an'i Japana.
Nidina ho 19 isan'andro ny raharaha COVID-236 nanerana ny firenena omaly, raha oharina amin'ny 25,000 mahery notaterina tamin'ny tapaky ny volana aogositra, nandritra ny onjan'ny otrikaretina fahadimy.
Tokyo dia nanamafy areti-mifindra 19 isan'andro tamin'ny Alahady, ny vitsy indrindra hatramin'ny 17 Jona tamin'ny taon-dasa.
Any Tokyo, manodidina ny 102,000 ireo trano fisakafoanana voamarina fa manana fepetra ilaina hanohitra ny COVID-19 dia tsy ho azon'ny fangatahana hampiatoana intsony ny alikaola alohan'ny 8 ora alina amin'ny ora eo an-toerana. Na izany aza, eo amin'ny 00 eo ho eo ny toeram-pisakafoanana tsy voamarina dia mila manohy manaraka ny fameperana taloha ary tsy maintsy mijanona amin'ny 18,000:9 alina ora eo an-toerana.
Ho fanampin'izay, ny trano fisakafoanana rehetra dia angatahana hametra ny haben'ny vondrona ho olona efatra isaky ny latabatra, ary ho an'ny vondrona lehibe kokoa dia ilaina ny porofon'ny fanaovana vaksiny.
Ny governemanta metropolitan'i Tokyo dia nilaza fa hanamafy ny fepetra fanoherana ny COVID-19 hatramin'ny faran'ny volana novambra mba hampiroboroboana ny famerenana ireo hetsika ara-tsosialy sy ara-toekarena sady misoroka ny fiverenan'ny aretina indray.